वास्तुशास्त्रअनुसार कस्तो घर बनाउनु शुभ मानिन्छ ? – Lokpati.com
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड अपराध प्रधानमन्त्री नेपाल प्रहरी नेकपा केपी शर्मा ओली राशिफल पक्राउ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड चितवन मृत्यु नेपाली काँग्रेस सरकार अमेरिका
वास्तुशास्त्रअनुसार कस्तो घर बनाउनु शुभ मानिन्छ ?
By लाेकपाटी न्यूज On ६ माघ २०७६, सोमबार ०९:१६
काठमाडौं। विश्वास गर्नेहरुले वास्तुशास्त्रलाई निकै माथिल्लो स्थानमा राखेका छन्। वास्तु शास्त्र परम्परागत विज्ञान नै भएको दाबी गरिन्छ। घर बनाउँदा वास्तुको साह्रै राम्रोसंग विचार पुर्याएर बनाउनेहरु धेरै छैन। घरको वनावटले घरमा बस्नेहरुमाथि शारिरिक, आर्थिक र मानसिक असर गर्ने विश्वास छ।
वास्तु शास्त्र भन्छ, ‘जब मानिस एउटा घरमा बस्न थाल्दछ त्यो घरको खास उर्जाले उसलाई असर गर्न सुरु गर्दछ। त्यसैले घर वास्तु शास्त्रलाई अनुशरण गरेर बनाउन जरुरी छ। वास्तु शास्त्रमा सही तरिकाले घर निर्माणले धन कमाउने उपायहरु पनि बताइएको छ।
टिप्स १ – कुनै घर, बिल्डिङ वा कार्यालको दक्षिण पश्चिममा घरको सतह भन्दा तल पर्ने गरेर पानी ट्याङकी, स्विमिङ पुल वा पानीको संग्रह गर्ने कुनै चीज बनाउनु हुँदैन। यसले घरलाई हानी पुर्याउँछ।
टिप्स २ – पैसा राख्ने, वाकस, दराज वा लकरलाई घरको दक्षिण वा दक्षिण पश्चिम भित्तामा राख्नुपर्छ, ताकि उत्तर दिशा खाली फर्कियोस्। उत्तर दिशा कुबेरको दिशा हो। यसरी पैसा राख्ने भाडो उत्तरतिर फर्काउदा पैसाको कमि नहुने विश्वास छ।
टिप्स ३ – कुनै पनि हालतमा घरको दलिन मुनि पैसा राख्नु हुन्न। यसले परिवारका सदस्यमाथि आर्थिक दबाब बढाउँछ। यसलाई पनि वास्तु शास्त्रको महत्वपूर्ण नियम मानिन्छ।
टिप्स ४ – पैसा राख्ने बाकस, दराज वा लकरको अगाडी ऐना राख्नु फलदायी हुन्छ। यसले पैसालाई दोब्बर पार्ने सांकेतिक उत्प्रेरणा दिन्छ। यो पनि वास्तु शास्त्रमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।
टिप्स ५ – घरको छानाको दक्षिण पश्चिमी भाग उत्तर पुर्वी भागभन्दा उच्च हुनुपर्छ। अर्थात् घरको छानो दक्षिण पश्चिम तिरबाट उत्तरपूर्वतिर ढल्किएको हुनुपर्छ।
टिप्स ६ – घरको दक्षिणी र पश्चिमी भित्ता उत्तरी र पूर्वी भन्दा अग्लो र मोटो हुनुपर्छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका दृष्टिले पनि यो महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसलाई वास्तुशास्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले अशुभ मान्छन्।
टिप्स ७ – घरको दक्षिण पश्चिम भागमा रुख रोप्नुपर्छ। यसले दुर्भाग्यबाट परिवार र व्यवसायलाई बचाउँछ। विज्ञानका दृष्टिले समेत पश्चिमी वायुलाई रोक्ने कारण यसलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ।
टिप्स ८ – पानी चुहिने पानीको धारालाई तत्कालै मर्मत गर्नुपर्छ। यसले धन क्षयीकरण गर्दछ। वास्तुशास्त्रका दृष्टिले मात्र होइन, वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्दा पनि चुहिने धाराले सिंगो घरलाई क्षति गर्दछ। पानीको लिकेजले घरको आयुसमेत घटाइदिन्छ।
टिप्स ९ – घरको मुल ढोकालाई चिटिक्क पारेर सजाउनुलाई निकै शुभ मानिन्छ। घरभित्र बैजनी रंगको भाडाोमा विरुवा राख्नुलाई पनि शुभ मानिन्छ। यसले घरको शोभा मात्र बढाउँदैन, पाहुनाहरुलाई आकर्षित गर्नुका साथ मनमा राम्रा विचारहरु प्रस्फुटन हुन्छ।
घर बनाउनुअघि जान्नैपर्ने सरकारी नियम
सहकारीका सात अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त के–के हुन् ?